Ndi SEO na ndi mmadu ndi ozo di?
Mmetụta nke Social Media na ụzọ ọ na-agbapụ na mpaghara nke Search Engine njikarịcha bụ eleghị anya otu n'ime ajụjụ ndị kasị arụ ụka. M na-akọwa ihe omimi dịka nke a: olee otú mgbasa ozi mmadụ na-emetụta SEO? Ndi echiche abụọ a na-eme ihe n'emekorita, ma o bughi ihe obula?
Lee onye na-apụnara mmadụ ihe - azịza kacha nso bụ ee, ọ na-eme. Ma ọ ga-aka mma ka ị tụlee nke abụọ, nkọwa sara mbara na nke zuru ezu. Ka anyị chee ya ihu - mgbasa ozi ọha na eze nwere njikọta na SEO, ma ọ nwere ike ịbụ otu mgbe niile? O di nwute, enwere m obi ike na otu obere ihe - mgbasa ozi mgbasa ozi enweghi, ma ọ dịkarịa mma, mmetụta na SEO. Ọ naghị enye aka nyochaa njikarịcha ụzọ ọtụtụ n'ime ndị mmadụ si kwere na ya.
N'okpuru ebe a, m ga-ejikọta aro m na ụfọdụ ihe ọmụma bara uru ndị otu ndị Google n'onwe ha nyere. Nke mbụ, ka anyị were ya n'egbughị oge - ọkachamara ụlọ ọrụ nyocha ụwa achọtụbeghị nkwenye maka mgbasa ozi ọha na eze maka ihe dị mkpa. M na-ekwu, ee, mgbasa ozi ọha na eze ka dị n'etiti ụzọ ndị zuru oke dị mma iji nweta nlezianya vidio kacha mma maka ọdịnaya. Na ee, n'ikpeazụ, ọ bụ ihe niile gbasara SEO. Kedu ihe anyị ga-eji mara nke ọma gbasara mgbasa ozi ọha mmadụ na-emetụta SEO? N'agbanyeghị ụdị azịza ziri ezi nwere ike ịbụ, o doro anya na mgbasa ozi ọha na eze nwere ike inyere gị aka nyochacha njirimara gị. Ma, m ka na-eche, ọ ga-achọ ibu nke na-eme ka ndị mmadụ mara ihe ndị ọzọ na-egosi na ọ bụ algorithm ugbu a?
Maka oge, Google algorithms egosighi. Ọ bụ ya mere naanị otu ụzọ ị ga-esi ghọta ụkpụrụ omume nke bọtịnụ ọchụchọ nke Google bụ ịlele ihe ọ bụla nwere ike ime na nyocha nke ndụ.Ị nwere ike ichetụ n'echiche, olee otú oge nyocha a ga-esi na-ewe oge ma na-arụ ọrụ-ike? Ọ dị mma, ka anyị laghachi azụ. Kedu otu mgbasa ozi na-emetụta SEO? Anyị nwere ike iji mgbasa ozi mgbasa ozi maka naanị ihe ọ bụla, ma ọ bụghị ihe kpatara ya na ogo, dịka ndị ọrụ Google si kwuo. Ọfọn, ọbụlagodi, ọ pụtaghị na mgbasa ozi mgbasa ozi adịghị enwe mmetụta na ọkwa ọ bụla, naanị n'ihi na Google kwadoro ya na mgbasa ozi ọha na eze adịghị eguzo maka ọkwa dị elu.
Ekwere m na azịza ziri ezi ma ọ bụ na-ezighi ezi nwere ike ịhụ ebe ebe okwu ahụ bụ "mmekọrịta. "Dị ka ọ bụ na okwu a ka a kpọtụrụ aha na ihe gbasara Rebooting Predictive White Paper nke Searchstrics wepụtara na 2016. Ekwenyesiri m ike na ụmụ okorobịa na-emegharị usoro egwu. Ya mere, naanị azịza ziri ezi banyere otú mgbasa ozi mgbasa ozi na-emetụta SEO ga-edozi - ee, ọ na-eme. Ma, enwereghi nnwekọrịta ma ọ bụ mmekọrịta abụọ na-adị n'ebe ahụ. Ya mere, ilekwasị anya n'ichepụta site na iji ụzọ dị iche iche nke mgbasa ozi ọha na eze ka bụ mkpebi siri ike. N'otu oge ahụ, Nchọpụta Nyocha Search chọrọ mgbalị gị na oge ya n'ụzọ nke ya Source .